🥇 ▷ IPhone 6 hadda waxaa lagu sii hayn karaa China Telecom welina lama soo gudbin ✅
IPhone 6 hadda waxaa lagu sii hayn karaa China Telecom welina lama soo gudbin
Shirkadda Isgaarsiinta Shiinaha ayaa horay u aqbashay kaydinta iPhone 6 laakiin wali lama soo gudbin
Shirkadda Isgaarsiinta Shiinaha waxay si xor ah u siisay amarrada waxa noqon doona aaladda dambe ee sare ee Apple, iPhone 6, kahor intaysan bilaabin si rasmi ah, sida ay horaantii toddobaadkan u sameysay mid ka mid ah tartamayaasheeda ugu waaweyn, China Mobile. Bog guri ayaa laga sameeyay websaydhka hawlwadeenka taleefanka gaar ahaan inuu horay u dalbado taleefanka gacanta, a muuqaal, oo loo malaynayo, sarkaal rasmi ah oo ka mid ah aaladda cusub ee taleefanka gacanta ee Apple.
Sawirada xayeysiinta ah ee loo yaqaan ‘iPhone 6’ ee ay isticmaasho Shiinaha Telecom ayaa bixinaya tilmaamo ku saabsan astaamaheeda
Sidaan ku arki karnaa muuqaalka hoose ee ka muuqda, 4.7 inji ah iPhone 6 ayaa lagu soo bandhigay websaydhka, kaas oo Shiinaha Telecom uu soo jeedinayo in ay leedahay cufnaanta pixel of 416, wax la mid noqon kara xallinta qaraarka la rajeynayo ee 1704 × 960 pixels in la sheegay maalmihii ugu dambeeyay. In kasta oo xanta badan ay xaqiijisay xogtan, sawirradii ugu dambeeyay ee ka mid ah aaladahaan hawlgalka waxay taageereen mala-awaal kale oo ka duwan, iyagoo tixraacaya qaraarka 1334 × 750 pixels oo leh 326 ppi. Hypothesis oo sidoo kale uu soo jeediyay wakhtigaas falanqeeyaha muhimka ah ee AppleJohn Gruber
Imaatinka mashiinka cusub ee iPhone 6, oo la rajaynayo inuu noqdo A8, oo ay weheliso qalabka sawirka faraha ee dib loo cusbooneysiiyay, “ID ID”, ayaa sidoo kale lagu sheegay muuqaalka, laba sheeko oo u badan tahay inay qeyb ka noqon doonaan aaladda cusub ee Apple. Waxaan arki karnaa sida tixraaca loogu sameeyo batteriga 2,100 mAh, taas oo diidi doonta qaar ka mid ah xanta hore ee ka hadashay batteriga oo leh awood 1,810 mAh. Ugu dambeyntiina, muuqaalkan waxaa loola jeedaa a 3 megapixel camera, wax wali waa in la xaqiijiyaa, laakiin taasi waxay noqon doontaa isbeddello aad u xiiso badan oo kamaradda hadda jirta.
Horraantii toddobaadkan Shiinaha Mobile-ka wuxuu bilaabay aqbalida iPhone 6 amarro hore, taas oo dhalisay in kaydadka la dhigo 33,000 saacado gudahood. Falanqeeyayaasha ayaa saadaalinaya in soo saarista jiilka cusub ee iPhone ay saameyn ku yeelan karto qayb weyn oo ka mid ah adeegsadayaasha Android, taas oo u horseedi doonta iyaga inay u guuraan macruufka, iyagoo uga mahadcelinaya shaashadda cusub iyo qaabeynta aaladdaan.
Wax kastoo ay tahayba, waa inaan sugnaa illaa Talaadada soo socota si aan u caddeyno dhammaan shakiga oo aan hubno in muuqaalka ay adeegsatay shirkadda Shiinaha ee Telecom inay tahay mid rasmi ah oo sax ah. Talaadada, Sebtember 9, Apple wuxuu u yeeray saxaafada xaflad ka dhacday Flint Center ee Cupertino iyo Waxaa la rajeynayaa in inta lagu gudajiro furaha iPhone 6 la soo bandhigi doono iyo, sidoo kale, aaladda koowaad ee xidhashada websaydhka shirkadda Californian.